मेगन मार्कल र राजकुमार ह्यारीले कहाँबाट पैसा पाउँछन् ? - BM Nepal
मेगन मार्कल र राजकुमार ह्यारीले कहाँबाट पैसा पाउँछन् ?
by BM NepalPosted on March 18, 2021
काठमाडौँ। ब्रिटिश राजकुमार ह्यारीले राजकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएर श्रीमती मेगन मार्कलसँग क्यालिफोर्निया सरेपछि परिवारले पैसा दिन बन्द गरेको बताएका छन्। उसोभए उनीहरूले अहिले कसरी आम्दानी गर्छन् त?
के राजकुमार ह्यारी र मेगनले राजपरिवारबाट पैसा पाउँछन् ?
सन् २०२० को ज्यानुअरीमा ड्यूक र डचिस अफ ससिक्सले राजकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने बताएका थिए। त्यो बेला नयाँ सहमतिअनुसार यो दम्पत्तिले केही समय ह्यारीका पिताबाट पैसा पाउने बताइएको थियो। त्यो पैसा डची अफ कोर्न्वल भनिने सम्पत्ति र लगानीबाट वा राजकुमार चार्ल्सको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट वा दुवैबाट कहाँबाट आउने हो स्पष्ट थिएन।
मार्च २०२० भन्दा एक वर्षअगाडि राजकुमार चार्ल्सको खाताबाट राजकुमार ह्यारी र मेगन एवं राजकुमार विलियम र केटको गतिविधिका लागि ५६ लाख पाउन्ड खर्च भएको देखिन्छ।
तर राजकुमार ह्यारीले एउटा टीभी अन्तर्वार्तामा ओप्रा विन्फ्रीलाई राजपरिवारले त्यसपछि पैसा दिन लगभग बन्द गरेको बताएका छन्। उनले पिताबाट आउने पैसाको कुरा गरेको कि ब्रिटिश नागरिकको करबाट सञ्चालित राजकोषबाट आउने पैसाको कुरा गरेको भन्ने स्पष्ट छैन। राजकुमार चार्ल्सको सन् २०२० को मार्चयताको खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन र उनको कार्यालयले यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहेन।
के ह्यारी र मेगन सम्पन्न छन्?
राजकुमार ह्यारी र मेगन दुवैसँग राम्रै पैसा भएको मानिन्छ। राजकुमार विलियम र राजकुमार ह्यारीले आमा राजकुमारी डायनाको एक करोड १३ लाख पाउन्डको ठूलो अंश पाएको मानिन्छ। ह्यारीले अमेरिका सरेको विषयमा बोल्दै विन्फ्रीलाई “मैले आमाले मलाई छोडेको पैसा पाएको र त्योबिना यो सबै गर्न नसकिने” बताएका थिए।
बीबीसीका शाही संवाददाता निक विचेलका अनुसार राजकुमार ह्यारीलाई उनकी जिज्यूआमाले दशौँ लाख पाउन्ड छोडेको बताइन्छ। महारानी एलिजाबेथको आमाको सन् २००२ मा मृत्यु भएको थियो।
आफ्नो अभिनय जीवनमा मेगनले सूट्स नामक टीभी शृङ्खलामा काम गरेबापत प्रत्येक एपिसोडका लागि ५० हजार डलर पाउने विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उनको आफ्नो ब्लग पनि थियो र क्यानडाको एउटा कम्पनीका लागि फ्याशन डिजाइन पनि गर्छिन्।
ह्यारी र मेगनको अन्य आय के छ ?
राजपरिवारको कार्यकारी सदस्य नरहेका कारण राजकुमार ह्यारी र मेगन आम्दानीमूलक काम गर्न स्वतन्त्र छन्। उनीहरूलाई विन्फ्रीको अन्तर्वार्ताका लागि पैसा तिरिएको थिएन तर उनीहरूले नेटफ्लिक्स र स्पटिफाईसँग सम्झौता गरेको थिए जसबाट उनीहरूलाई लाखौँ डलर आम्दानी हुने बताइएको छ। उनीहरूले आर्चवेल नामक संस्था बनाएका छन् जसको गैरनाफामूलक कामका साथै नाफामूलक काम पनि छ।
उनीहरूको सुरक्षाका लागि कसले पैसा तिर्छ ?
उनीहरू यूकेमा हुँदा उनीहरूलाई नगर प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्थ्यो। त्यसको खर्च सार्वजनिक गरिएको छैन। क्यानडा सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू क्यानडाबाट अमेरिका सरे।
त्यहाँ लकडाउनको पहिलो केही महिनाहरू अमेरिकी अर्बपति तथा मिडिया मालिक टेलर पेरीले घर र सुरक्षाको खर्च दिएको उनीहरूले बताएका छन्।
विन्फ्रीले उनीहरू पैसाको पछि लागेको आरोपका बारेमा सोधेको प्रश्नमा राजकुमार ह्यारीले नेटफ्लिक्स र स्पटिफाईसँगको सम्झौताबारे पूर्वयोजना नरहेको तर आवश्यक परेको बताए। “मेरो तर्फबाट मलाई चाहिएको कुरा भनेको सुरक्षाका लागि र मेरो परिवार सुरक्षित राख्नका लागि पुग्ने पैसा हो,” ह्यारीले बताएका थिए।
राजपरिवारमा रहँदा उनीहरूको खर्च कसरी चल्थ्यो ?
राजकीय उत्तदायित्व परित्याग गर्नुअघि उनीहरूको ९५ प्रतिशत खर्च पिता राजकुमार चार्ल्सबाट आउँथ्यो। सन् २०१८ देखि सन् २०१९ सम्म ५० लाखभन्दा केही बढी रहेको त्यो पेसाले उनी र राजकुमार विलियम दम्पतीको सार्वजनिक जिम्मेवारी र केही व्यक्तिगत खर्च चल्थ्यो।
बाँकी पाँच प्रतिशत करदाताको पैसाबाट निर्मित राजकोषबाट उपलब्ध हुन्थ्यो। यो कोष सरकारले राजपरिवारको आधिकारिक जिम्मेवारी र राजदरबारको खर्चका लागि दिने पैसा हो।
प्रतिवर्ष राजकोषमा ब्रिटिश सरकारले आठ करोड ५९ लाख पाउन्ड दिने गर्छ। यो पैसामा क्राउन स्टेट भनिने व्यावसायिक सम्पत्तिको नाफाबाट पनि आउँछ।क्राउन स्टेटअन्तर्गत लन्डन, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा सम्पत्तिहरू छन् जसलाई एउटा स्वतन्त्र संस्थाले व्यवस्थापन गर्छ। तिनको नाफा ब्रिटिश ढुकुटीमा जान्छ।
त्यसबाट १५ देखि २५ प्रतिशत सरकारले राजकोषमा हालिदिन्छ। क्राउन स्टेटको सम्पत्ति महारानीको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। त्यो राजसंस्थाको सम्पत्ति हो। बीबीसी
Prev शारीरिक कमजोरी र यौन दुर्बलताबाट बच्न पुरुषले खानै पर्ने यी ६ खानेकुरा, हुन्छन् आश्चर्यजनक फाइदा
Next पार्टीको निर्णय फिर्ता हुन्न, नेपाल र रावलको स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य छ : ओली